Iindaba -IArray yeGeophone yeArhente ibonelela ngokuJongwa kweLosin Basin
IArray yeGeophone yeArhente ibonelela ngokuKhangela okutsha eLos Angeles Basin
Nge-1 ka-Agasti 2018 – Besebenzisa uluhlu lwee-geophones ezilinganiselwe ikofu ezithunyelwe kangangenyanga kwiyadi yangasemva, iigalufa kunye neepaki zikawonke-wonke, abaphandi baqokelela idatha eyoneleyo yokuvumela ukuba babeke imephu kubunzulu kunye nokumila kweelwandle zaseSan Gabriel naseSan Bernardino ELos Angeles, eCarlifonia.
I-Seismologists zicinga ukuba ezi zitya zingasenza "umtsalane" ukugxila kunye nokubamba amandla kwinyikima emazantsi eSan Andreas Fault, ke ngoko ukuqonda ulwakhiwo lwabo kubalulekile ukunceda ukuqikelela ukuba bangawasebenzisa njani na amandla asuka kwinyikima yedolophu yaseLos Angeles. .
Iqela lophando, likhokelwa nguPatricia Persaud waseLouisana State University kunye noRobert Clayton ovela eCalifornia Institute of Technology, bekwazile ukwenza imephu kwezi zitya zimbini ngokunzulu kunakwizifundo zangaphambili, ngokwengxelo yabo kwiileta zophando ngeSeismological. Babonisa ukuba isitya saseSan Gabriel sinzulu kunesitya saseSan Bernardino kwaye isitya saseSan Bernardino sinesimo esingaqhelekanga. U-Persaud kunye noogxa bakhe bafumanise imiqondiso yezinto ezinzulu kumhlaba owomileyo onokuthi unxulunyaniswe neempazamo ezimbini-iRed Hill kunye neRaymond-ezazifakwe kwimephu ngaphambili kwiindawo ezikufutshane.
UPatricia Persaud kunye noMackenzie Wooten, isidanga seCalTech, bahambisa indawo kwindawo engaphambili yendawo yokuhlala eLos Angeles. / UPatricia Persaud
"Kungoku nje kusekutsha kakhulu ukuba singatsho ukuba iziphumo zethu zizokutshintsha njani kwindlela esinokucinga ngayo ngezi zixhobo zokuhambisa amandla enyikima," utshilo uPersaud. "Kodwa ke siqokelela iinkcukacha ezithe kratya kwindawo leyo ezakusetyenziselwa ukuphucula ubume besitya."
IiGeophones zizixhobo eziguqula isantya sokunyakaza komhlaba sibe ngumbane onokusetyenziselwa ukumisela ijiyometri yezakhiwo ezingaphantsi komhlaba. Ukujonga iinkcukacha ze-sedimentary basin Basin kufuna inani elikhulu lezitishi zenyikima ezibekwe kufutshane ukuze kubambe utshintsho olubalulekileyo kulwakhiwo lwamva ngapha kwebheseni. Ukucwangciswa kweGeophone kubonelela ngendlela engabizi kwaye enokwenzeka yokuqokelela le datha kwindawo enabantu abaninzi edolophini, xa kuthelekiswa neengxaki kunye nenkcitho yokuhambisa i-sebandomet ebanzi, utshilo uPersaud.
Inqaku ngalinye lama-202 asetyenziswe kolu phando, kwimigca emithathu ejikeleze izitya ezisemantla, malunga nobungakanani bekhofi. "Banobunzima obumalunga neepawundi ezintandathu kwaye banedatha, ibhetri kunye nokurekhoda konke kwisikhongozeli esinye," ucacisile uPersaud. “Ukuyibeka emhlabeni somba umngxunya omncinci oza kuvumela iindawo ukuba zigutyungelwe malunga nee-intshi ezimbini zomhlaba xa sele zityaliwe. Uninzi lwabahlali bendawo yaseLos Angeles basixelela ukuba sibabeke naphina apho sifuna khona, abanye bade basincede ekumbeni imingxunya; sikhetha indawo kwiiyadi zabo kwaye kwisithuba semizuzu emihlanu sinendawo kwaye siyirekhode. ”
Kwiimeko ezininzi, abanini bepropathi "babenobuhlobo kakhulu kwaye behlala" ngexesha lofundo lwangoku, utshilo uPersaud. “Yintoni enomdla xa sifumene impendulo evumayo ibiphantse yangoko. Abahlali baseLos Angeles bayayazi kakhulu ingozi yenyikima kulo mmandla, kwaye bahlala benomdla wokufunda kunye neendawo, kwaye bafuna ukufumana okungakumbi. Abanye bathembisa ukusasaza iindaba malunga nesifundo sethu kwimithombo yeendaba kwaye bakhuthaze abahlobo babo kunye nabamelwane ukuba nabo bathathe inxaxheba.
Amanqanaba aqokelela idatha ngokuqhubekayo kwiintsuku ezingama-35. Ngeli xesha, babone intshukumo yomhlaba ukusuka kubukhulu be-6 kunye neenyikima ezinkulu ezenzeka kumawakawaka eekhilomitha ukusuka eLos Angeles. Idatha yefomathi yenyikima evela kwezi nyikima zingasetyenziselwa indlela ebizwa ngokuba yindlela yokusebenza yokwamkela ukwenza imephu ubukhulu beqweqwe kunye nolwakhiwo olunzulu olungaphantsi kwesikhululo seismism. Imisebenzi yomamkeli ebalwe kuludwe lwe-nodal iyafana naleyo ibalwe kwidatha ebanzi, abaphandi baqukumbela, kodwa uluhlu lwezinto ezinobunkunkqele lubonisa ukujongwa okuphezulu kwizakhiwo ezinje ngomda phakathi koqweqwe lomhlaba nengubo yangaphakathi kunye nonxibelelwano phakathi kwentlenga kunye ilitye elingaphantsi kwezitya zokuhlambela.
Ngeli hlobo, iqela lophando libuyele eCarlifonia libeka iindawo "ecaleni kwemigca emitsha eyenzelwe ukugcwalisa nakweyiphi na indawo apho kungakho utshintsho kwimo yesitya," utshilo uPersaud. "Sisandula ukuhambisa iiprofayili ezintathu ezitsha kwaye siza kuthi emva koko siqokelele iziphumo kuzo zonke iiprofayili zethu ukuvelisa uhlobo oluhlaziyiweyo lwesakhiwo sezitya."
Ixesha Post: Sep-02-2020